တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူမှုရေးနည်းလမ်းများပိတ်ထားသည် Martech Zone
သောကြာနေ့, ဧပြီ 30, 2010 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2014 Douglas Karr
ငါတို့ရှိသမျှသည်သက်သေခံကြ၏။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်များမှဆူညံ။ မလိုအပ်သောကုမ္ဗဏီများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လူအများစုရုံးနေမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသည်။ အရမ်းဆူညံနေတယ်
ဒါဟာအမြဲတမ်းနှင့်အတူပြanနာဖြစ်ခဲ့သည် အီးမေးလ်စျေးကွက်... စျေးကွက်သမားတွေကသူဌေးတွေကအပတ်တိုင်းအီးမေးလ်တစ်စောင်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သူတို့လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထိုသို့ယူတာပဲ။ ထို့အပြင်ပြောင်းလဲခြင်းထက်အလားအလာရှိသောအလားအလာကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွင် status update ကိုလွှင့်ပစ်ခြင်းထက် ပို၍ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။ ဤသည်အသစ်သောနတ်ကတော်ကုမ္ပဏီများသည်စကားပြောရန်နှင့်ပိုပြီးယောက်ျားလေးသူတို့အဘို့အများကြီးပိုအခွင့်အလမ်းပေးပါပြီ။ ငါအရင်ကလုပ်ခဲ့တာတွေထက်ဒီရက်တွေကိုလေ့လာခြင်း၊ စာရင်းပေးခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းနေတယ်။
တိတ်ဆိတ်စွာနေနိုင်ခြင်းသည်လူသားတို့၏ထင်ရှားသောအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Walter Bagehot
ငါ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် (စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါဘယ်မှတ်မိမှန်းမသိဘူး) စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။ Twitter တွင် Pause ခလုတ်ရှိသင့်သည်။ မှန်ပါတယ်၊ ငါတို့ Twivo လိုတယ်။ ဒါကြောင့် crap tweets ကိုကျော်ပြီးတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုရနိုင်တယ်။ ငါတို့ကလိုက်မလုပ်ဘူး၊ ပိတ်ဆို့ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ပြောနေတာကိုပဲပြောနေတာပဲ။ သူ၏ D & D တွေ့ဆုံမှုကိုကြိုက်နှစ်သက်သည့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါသလား။ ခေတ္တရပ်နား!
ငါကအခြားသူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးရုံသက်သက်မဟုတ်ဘူး။ မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းကျွန်ုပ်၏အခြေအနေအသစ်အဆန်းများမှာအနည်းငယ်မျှသာရှိသည် - ကျွန်ုပ်အားပေးအပ်ထားသည့်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရန်အတွက်တစ်နေ့လျှင်နာရီ ၂၀ အလုပ်လုပ်နေရပြီ။ ငါသတိထားမိသည်မှာငါရှိသည် နောက်လိုက်များနှင့်ပရိသတ်များယခု ငါတနေ့လုံး yapping သောအခါငါလုပ်ခဲ့တယ်ထက်။
ပြောစရာမရှိသည့်အချိန်များအပြင်သင်ဘာမျှမပြောသင့်သည့်အချိန်များလည်းရှိသည်။ ငါလည်းဒီတစ်ခုအတွက်အပြစ်ရှိတယ် တခါတရံငါအခွင့်အလမ်းကိုမဆီးတားနိုင် အဲဒီမှာထွက်တဲ့ငေါ့ဗုံးပစ် အမှုအရာကကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီး ... ငါ့ကိုအချို့သောမြည်းကဲ့သို့ကြည့်စေခဲ့သည် အဖြစ် Erik ကုန်းပတ် ဒါကြောင့်လျောက်ပတ်စွာထား, Image ကအရာအားလုံးပါ။ Twitter က Forever ပါ.
ထွက်ရှိဆူညံသံပိုမိုကျယ်လာနှင့်ပို။ ရှေးရှေးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပြောနေတာမဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့အသံဟာလူတိုင်းကနားထောင်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားတဲ့နောက်ခံထဲမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်အသံဖြစ်လာတယ်။ လူမှုရေးသင်သည်အမြဲတမ်းစကားပြောခံရဖို့ရှိသည်ဆိုလိုသည်မဟုတ်, တကယ်တော့လူမှုရေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် နားထောင်ခြင်းအကြောင်း အခြားအရာအားလုံးထက်။ သင်၏အသံကိုအနားယူပြီးဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပါ။
Tags: တိတ်ဆိတ်သောပါးစပ်ပိတ်ထားတိတ်ဆိတ်ခြင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာWalter bagehot
ဧပြီ 30, 2010 မှာ 1: 21 pm တွင်
မင်းရဲ့အတွေးအမြင်တွေကို ငါလုံးဝမျှဝေလိုက်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက် မင်းရဲ့နောက်ထပ် tweet၊ ပို့စ်၊ လွှင့်တင်မှုအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်စေဖို့အတွက် မျှော်လင့်ထားခဲ့တယ်။ အဲဒီခံစားချက်ကို ဖန်တီးရတာက ဟိုမှာ တစ်ချိန်လုံး အော်ဟစ်နေတာထက် အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။
မေလ 1, 2010 မှာ 9: 27 AM
အာမင် ဒေါ့။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်သည် ကာလကြာရှည်စွာ ဟောကြားထားခဲ့သော အတိအကျ ဖြစ်ပါသည်။ တိုးတိုးပြောနိုင်တဲ့အခါ ဘာလို့အော်တာလဲ။ http://blog.cantaloupe.tv/blog/innovative-marketing/0/0/the-whisper-approach-to-online-video-marketing
ဇန်နဝါရီလ 16 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ7နာရီ 47 မိနစ်
ဒါက ဒီမှာ ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်ပါ။ တွစ်တာရဲ့ ခံစားချက်ကို ရဖို့ခက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တခြားသူတွေ တွစ်တာ လွှင့်နေတာကို သင်မြင်ပြီး သင် ဒီ့ထက်ပိုပြီး လုပ်သင့်မလား။ ဒါက အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။